Fitantanam-pitondrana · Septambra, 2021 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Septambra, 2021
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Septambra, 2021
Azia Atsinanana 20 Septambra 2021
Natao hiteraka tahotra ao an-tsain'ireo izay mety ho mpamatsy vola sy mpamandrika ny fitsipika fahazoan-dalana mba hanakanana azy ireo tsy hanohana ny asa fanaovan-gazety tsy miankina any Singapaoro.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 19 Septambra 2021
Nanolo-kevitra ny fampiasana ny didy fakan-tahaka islamika ny filohan'ny Mpitantana ny Raharaha Fivavahana any Torkia,Ali Erbas, hifehezana ny sehatry ny tambajotra sosialy.
Azia Atsinanana 13 Septambra 2021
Nanomboka tamin'ny herintaona, nitaky ny fialàn'ny praiminisitra Gen Prayut izay tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny alàlan'ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2014 ny mpanao fihetsiketsehana.
Azia Afovoany sy Kaokazy 10 Septambra 2021
Tamin'ny 1 Septambra, ny olom-pirenena rehetra mihoatra ny 18 taona dia tsy maintsy mampiseho porofo fa vita vaksiny rehefa miditra amin'ny toerana mihiboka, ao anatin'izany ny trano fisakafoana, ny fisotroana kafe, ary toeram-pivarotan-dehibe.
Azia Atsinanana 03 Septambra 2021
"Hafatra iray mahatonga ireo izay manan-kevitra na fanakianana manorina mifandraika amin'ny olana ara-tsosialy mba hatahotra sy hisalasala ka hametra ny fahafahan'izy ireo maneho hevitra ity didim-pitsarana ity"